Finland waxaad ka heli kartaa sharciga joogtada ah, haddii aad wadanka deganayd wakhti dheer. Sharciga joogtada ah waxaad codsan kartaa oo kaliya, haddii aad Finlad joogto.
Waxaad heli kartaa sharci joogtada ah (P), haddii
aad daggantahay Finland ugu yaraan afar sano adiga oo ku deggan sharciga A iyo
haddii aanad mudadaas daganayn wadan kale oo dibadda ah mudo ka badan labo sano iyo
haddii ay jiraan shuruudihi laguugu siiyay sharciga deganaanshaha sii socda.
Haddii ad haysatay sharciga A markii ad imanaysay Finland, mudada afarta sano waxa lagaaga soo tirinayaa maalintii ad timiday Finland. Haddii ad Finland ku qaadatay sharciga A muddadaas afarta sano waxa lagaaga soo xisaabinayaa maalintii sharciga A laguu oggolaaday. Haddii ad Finland ka heshay magangaliyo caalami ah muddada afarta sano waxa lagaaga soo bilaabayaa maalintii ad Finland soo gashay.
Sharciga joogtada ah waa laguu diidi karaa haddii:
ad gashay fal dambi ah oo ciqaab xabsi ah lagu heli karo
haddii lagaaga shikisanyahay fal dambi ah oo lagu heli karo ciqaab xabsi ah
haddii ad gashay labo fal oo dambi ah ama ka badan
haddii lagaaga shikisanyahay labo fal oo dambi ah ama ka badan
Sharciga joogtada ah waxa uu shaqaynayaa muddo anan la cayimin. Sharciga waa lagaala noqon karaa haddii ad si joogto ah uga guurto Finland ama ad wadan dibadda ah labo sano oo isdaba jog ah muddo ka dheer joogto ama ad warbixin beena bixisay wakhtigii sharciga lagu siinayay.
Qof muddo dheer joogay waddanka oo haysta dhalasho wadan saddexaad sida uu u helayo sharciga EU- da
Qofka haysta dhalasho waddan saddexaad waa qof anan ahayn muwaadin Wadamada waqooyiga, Wadamada midowga Yurub, Liechtenstein ama Swizerland.
Waxad heli kartaa sharciga EU-da (midowga Yurub) (P-EU) ee qofka haysta dhalashada waddan saddexaad, haddii:
haddii ad dagantahay Finland ugu yaraan shan sano adiga oo haysta sharciga A
anadna muddadaas dagganayn wadan dibada ah muddo 10 bilood ka badan iyo
haddii sababihii ad ku heshay sharcigii hore ay wali jiraan
P-EU sharciga la yidhaahdo waxa loo dalbadaa qaabka loo dalbado sharciga joogtada ah.
P-EU sharciga la yidhaahdo waa mid shaqaynaya muddo anan cayimnayn.
P-EU sharciga la yidhaahdo waxa lagu diidi karaa sababo lamid ah kuwa lagu diidi karo sharciga joogtada ah.
Sidan ayaad u codsanaysaa sharciga joogtada ah
Ku codso sharciga joogtada ah adeegga Enter Finland:
Gal adeegga. Caddee aqoonsigaadga adigoo isticmaalaya aqoonsiga bangiga shabakadda, xaqiijinta muwaadinta ama xaqiijinta moobaylka.
Tag goobta adeegga ee Hay’adda socdaalka saddex bilood gudohood. Horay wakhti uga sii qabso adeegga qabsashada ballanta ee laga helo bogagga shabakadda Hay’adda socdaalka.
Si joogto ah u hubi akoonkaaga Enter Finland. Akoonkaaga ayaa laguugu soo sheegayaa, haddii codsigaada looga baahan yahay faahfaahin dheeraad ah. Waxaa kale oo akoonkaada laguugu soo sheegayaa wargelinta go’aanka.
Haddii aadan awoodin ama aadan aqoonin in aad sharciga joogtada ah ku codsato shabakadda:
Ku codso codsiga warqadda ah sharciga joogtada ah.
Ogolaanshaha joogista joogtada ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Warqada dalabkaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa